Indostrian'ny hotely: Mahazo $ 83 miliara ambanin'ny taona 2019
Home » Vaovao momba ny indostrian'ny fandraisam-bahiny » Indostrian'ny hotely: Mahazo $ 83 miliara ambanin'ny taona 2019
Na dia nampihatra ny fepetra fiarovana sy fidiovana bebe kokoa aza ireo trano fandraisam-bahiny ary namboarina tamin'ny tontolo aorian'ny COVID, ny fanarenana amin'ny ambaratonga alohan'ny pandemika dia mety maharitra taona maro.
Ny valan'ny COVID-19 dia niantraika tamin'ny sehatra rehetra erak'izao tontolo izao, fa ny indostrian'ny hotely no anisan'ny tena voa mafy
Ny fidiram-bolan'ny indostrian'ny hotely manerantany dia nidina hatramin'ny 198.6 miliara dolara tamin'ny taona 2020, fihenan'ny 46% isan-taona
Ny isan'ny mpampiasa ao amin'ny indostrian'ny hotely dia nihena antsasaky ny afovoan'i COVID-19
Mitohy ny areti-mandringana miteraka fikorontanana goavana amin'ny indostrian'ny hotely maneran-tany. Na dia nampihatra ny fepetra fiarovana sy fidiovana bebe kokoa aza ireo trano fandraisam-bahiny ary namboarina tamin'ny tontolo aorian'ny COVID, ny fanarenana amin'ny ambaratonga alohan'ny pandemika dia mety maharitra taona maro.
Raha ny angom-baovao farany, ny vola miditra amin'ny indostrian'ny hotely maneran-tany dia antenaina hitombo 43.4% isan-taona-taona ary hahatratra $ 284.7bn amin'ny 2021, mbola $ 83bn ambany noho ny amin'ny 2019.
Famerenana telo taona amin'ny ambaratonga alohan'ny COVID-19
Ny valanaretina coronavirus dia niantraika tamin'ny sehatra rehetra erak'izao tontolo izao, fa ny indostrian'ny hotely no anisan'ny tena voa mafy. Mba hifehezana ny fihanaky ny viriosy dia nametraka lalàna momba ny fanidiana ireo firenena manerantany, ka nahatonga fialan-tsasatra an'arivony an'arivony ary trano fandraisam-bahiny nikatona tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2020. Na dia maro tamin'izy ireo aza no nametra ny fameperana fivezivezena mamela ireo hotely hisokatra am-pitandremana indray mandritra ny vanim-potoana fitsangantsanganana fahavaratra. ny roa volana voalohany tamin'ny taona dia namokatra fidiram-bola be.
Ny fanadihadiana natao farany dia nampiseho ny fidiram-bolan'ny indostrian'ny hotely eran-tany nitentina $ 198.6bn tamin'ny taona 2020, fihenan'ny 46% isan-taona. Na dia andrasana aza ny sehatra iray manontolo hahita maso fanarenana miaraka amin'ny fidiram-bola mitentina $ 86.2bn amin'ny 2021, dia mbola eo ambanin'ny ambaratonga talohan'ny COVID-19 izy io.
Ny angon-drakitra dia manondro fa haharitra telo taona vao ho sitrana ny indostrian'ny hotely amin'ny valanaretina COVID-19. Ao amin'ny 2022, ny vola miditra dia vinavinaina hitombo 20% ary hahatratra $ 342.6Bn, $ 1.3 bn ambany noho ny tamin'ny 2017. Tamin'ny 2023, ny hotely manerantany dia vinavinaina hahazoana $ 390bn amin'ny fidiram-bola. Amin'ny faran'ny 2025, antenaina hiakatra amin'ny $ 456.2bn ity tarehimarika ity.
Ny antontan'isa dia mampiseho ny isan'ny mpampiasa indostrian'ny hotely nihena antsasaky ny afovoan'ilay areti-mifindra, nihena hatramin'ny 1.1 miliara tamin'ny 2019 lasa 595 tapitrisa tamin'ny taona 2020. Na dia maminavina an'io isa io aza ny 845.8 tapitrisa amin'ny 2021, dia mbola 218 tapitrisa ambanin'ny 2017 ny haavony. Amin'ny 2023, ny isan'ny mpampiasa dia vinavinaina ho tafarina hatrany amin'ny 1.19 miliara.
Radoan'ny hotely dimy lehibe indrindra eran-tany very $ 14B amin'ny vola miditra eo afovoan'ny pandemika
Amin'ny maha tsena hotely lehibe eran-tany sy trano misy trano fandraisam-bahiny efatra amin'ny dimy lehibe indrindra manerantany, ny vola miditra amin'ny indostrian'ny hotely amerikana dia tombanana hitsambikina hatramin'ny 55% YoY ka hatramin'ny $ 65.6bn amin'ny 2021, mbola $ 20bn ambany noho ny talohan'ny areti-mandringana.
Na izany aza, asehon'ny antontan'isa fa haharitra taona maro vao tafarina ny tsena amerikana avy amin'ny COVID-19. Ny vola miditra amin'ny Wyndham Worldwide, ny trano fandraisam-bahiny lehibe indrindra eto an-tany noho ny isan'ny trano fandraisam-bahiny, dia nilentika 36% tao anatin'ny areti-mandringana, nidina hatramin'ny $ 2bn tamin'ny 2019 ka hatramin'ny $ 1.3bn tamin'ny taona 2020. Ny tatitry ny vola azo tamin'ny orinasa 2020 dia nanambara fa very tanteraka ny vola -ny taona dia $ 132 tapitrisa, ary ny fidiram-bola netina $ 96 tapitrisa.
Ny fidiram-bolan'ny Choice Hotels International, ny trano fandraisam-bahiny faharoa lehibe indrindra manerantany, nilentika 31% na $ 340.7 tapitrisa tamin'ny taona 2020. Tamin'ny taona 2019, nitatitra vola 1.1 tapitrisa dolara amerikana ny orinasa. Nihena ho 774.1 tapitrisa dolara io tarehimarika io tamin'ny taon-dasa.
Na izany aza, Marriot International, ny faritry ny hotely lehibe fahatelo misy hotely 5,974 any amin'ny firenena 110 mahery, nanatri-maso ny fatiantoka lehibe indrindra, ary nitentina 10.4 tapitrisa dolara ny vola miditra tao anatin'ny krizy COVID-19.
Hilton Worldwide Holdings, toy ny gadona hotely lehibe indrindra fahefatra eran'izao tontolo izao, narahina fatiantoka 1.5 tapitrisa dolara tamin'ny taona 2020.
Asehon'ny statistika fa ny gadra hotely dimy lehibe indrindra manerantany, ao anatin'izany ny Intercontinental Hotels Group ho orinasa tokana tsy US ao amin'ity lisitra ity, dia nitentina $ 14bn tao anatin'ny areti-mandringana COVID-19.
Fraport AG: ny fidiram-bola sy ny tombom-barotra amin'ny taona 2020 dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fihenan'ny COVID-19
Fiangonana katolika momba ny fanambadiana pelaka: ny fahotana dia tsy mahazo fitahiana